Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.2 စမ်းသပ်ချက်ဘာတွေလဲ?
သင်တန်းသားများ၏စုဆောင်းမှု, ကုသမှုကျပန်း, ကုသမှု၏ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များ၏တိုင်းတာခြင်း: randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်လေးအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်။
randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်ပုံစံအမျိုးမျိုးယူနိုင်ပါသည်နှင့်အပြုအမူအများအပြားအမျိုးအစားများကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းသားများ၏စုဆောင်းမှု, ကုသမှုကျပန်း, ကုသမှု၏ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များ၏တိုင်းတာခြင်း: ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အမာခံမှာထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်လေးအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများရှိ randomized ။ အဆိုပါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏အခြေခံသဘောသဘာဝကိုမပြောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုလုပ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အတိတ်ကာလကလူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့အပြုအမူကိုတိုင်းတာရန်ခက်ခဲခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အခုပုံမှန်အများအပြားဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေဖြစ်ပျက်နေသည်။ ဤသူတို့သည်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆနိုင်သူသုတေသီများယခင်ကမဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ကို run နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒီအားလုံးနည်းနည်းပိုပြီးကွန်ကရစ်-နှစ်ဦးစလုံးအတူတူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုပြောင်းလဲ-စေပြီရဲ့မိုက်ကယ် Restivo နှင့် Arnout ဗန်က de Rijt ရဲ့စဉ်းစားပါတည်းခိုခဲ့ရာစေရန် (2012) ။ အဆိုပါသုတေသီများဝီကီပီးဒီးယားမှအယ်ဒီတာပံ့ပိုးမှုများကိုအပေါ်အလွတ်သဘောသက်တူရွယ်တူဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ချင်တယ်။ အထူးသဖြင့်သူတို့က, မဆို Wikipedian ခက်ခဲအလုပ်နှင့်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယဝန်ခံဖို့မဆိုအခြား Wikipedian တို့အားပေးနိုငျကွောငျးတခုချီးမြှင့် barnstars ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt Wikipedians ထိုက်သော 100 barnstars ပေး၏။ ထို့နောက် Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt လာမည့်ရက်ပေါင်း 90 ကျော်ဝီကီပီးဒီးယားမှလက်ခံသူများ '' နောက်ဆက်တွဲပံ့ပိုးမှုများကိုခြေရာခံ။ သူတို့၏အံ့သြဖို့အများကြီး, သူတို့ barnstars ချီးမြှင့်တော်မူသောအားလူတဦးတည်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်နည်းပါးလာတည်းဖြတ်စေခဲ့ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်အ barnstars တားခြင်းထက်အလှူငွေအားပေးအားမြှောက်ခံရဖို့ပုံရသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt တစ်ဦး "အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့်စောငျ့ရှောကျ" စမ်းသပ်မှု run မကြသည် ဟူ. ၎င်း, သူတို့တစ်တွေ randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုပြေးကြ၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး barnstar ခံယူ 100 ထိပ်တန်းမျှဝေသူကိုရှေးခယျြဖို့အပြင်, သူတို့လည်းသူတို့တစ်တွေ barnstar မပေးခဲ့ပါဘူးဘယ်သူကို 100 ထိပ်တန်းမျှဝေသူခူး။ ဤရွေ့ကားတရာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်သူတစ်ဦး barnstar တယ်ကျပန်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူ။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုမှာကြည့်ရှုသောအခါ, သူတို့ကလည်းပံ့ပိုးမှုများအတွက်မတ်စောက်သောတစ်စက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ သုတေသီကုသမှုအုပ်စုတွင်လူ (ဆိုလိုသည်မှာ, barnstars လက်ခံရရှိ) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်လူနဲ့နှိုင်းယှဉ်လာသောအခါနောက်ဆုံးတွင်သူတို့က barnstar အယ်ဒီတာများနှင့် ပတ်သက်. 60% ပိုပြီးအထောက်အကူပြုစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်အလှူငွေအတွက်ဒီတိုးနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ခြုံငုံကျဆင်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ရာအရပျကိုယူပြီးခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကဖော်ပြသည်အဖြစ်, စမ်းသပ်ချက်အတွက်ထိန်းချုပ်အုပ်စုအတန်ငယ်ဝိရောဓိသောလမ်းအတွက်အရေးပါသည်။ အတိအကျ barnstars ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်, Restivo နှင့်ဗန် der Rijt barnstars မခံမယူခဲ့ပါကစောငျ့ရှောကျဖို့လိုတယျ။ စမ်းသပ်ချက်အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်သောအကြိမ်ပေါင်းများစွာသုတေသီများထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးထားရန်ပျက်ကွက်။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt တစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သူတို့သည်အတိအကျမှားနိဂုံးရေးဆွဲခဲ့ကြပေသည်။ ခိုးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်း, တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုမပါဘဲစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပြေး: ထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုများကအဓိကလောင်းကစားရုံကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူန်ထမ်းကသူ့ကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ထုတ်နိုင်မှသာသုံးနည်းလမ်းများရှိပါသည်ဟုသူကဆိုသည်ဒါကြောင့်အရေးကြီးလှသည် (Schrage 2011) ။
စုဆောင်းမှု Random, ကြားဝင်နှင့်ရလဒ်များ: Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ရပ်စမ်းသပ်မှုလေးအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖော်ပြသည်။ အတူတူ, ဤလေးပါဝင်ပစ္စည်းများသိပ္ပံပညာရှင်များဆက်စပ်မှု ကျော်လွန်. ရွှေ့နှင့်ကုသမှု၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုသည်။ အထူးသ, ကျပန်းသင်ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါသင်သင်တန်းသားများ၏အစုသည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများခန့်မှန်းရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းတစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုနှင့်တကွသင်ရလဒ်များအတွက်မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်မရှက်ကြောက်ငါအလားအလာရလဒ်များမူဘောင်ကို အသုံးပြု. နည်းပညာဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအတွက်တိကျသောလုပ်မယ့်အရေးဆိုမှုဖြင့်စေသောဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေနိုင်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ချက်များ mechanics ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံဥပမာဖြစ်ခြင်းအပြင်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့လေ့လာမှုလည်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Analog စစမ်းသပ်ချက်ကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖွစျနိုငျကွောငျးဖျောပွ။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့စမ်းသပ်မှုကကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျမညျသူမဆိုဖို့ barnstar ပေးဖို့လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်နှင့် (ပြင်ဆင်ရန်သမိုင်းအလိုအလြောကျဝီကီပီးဒီးယားကမှတ်တမ်းတင်သည်ကို ထောက်. ) ကတည်းဖြတ်-ကျော်အချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလ၏ရလဒ်ကို-number ကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာကုသမှုနှင့်တိုင်းတာရလဒ်များကယ်နှုတ်ဤစွမ်းရည်အတိတ်တွင်စမ်းသပ်ချက်မတူဘဲသှေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုလူ 200 ပါဝင်ပတ်သက်ပေမဲ့, 2000 သို့မဟုတ် 20,000 လူတို့နှင့်အတူပြေးခဲ့ကြနိုင်ဘူး။ 100 တစ်အချက်တစ်ချက်အားဖြင့်၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုတက်ချုံ့ချဲ့ခြင်းမှသုတေသီတွေကတားဆီးအဓိကအရာကကျင့်ဝတ်ခဲ့ကုန်ကျမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အကြောင်း, Restivo သည်နှင့်ဗန်က de Rijt မထိုက်တန်သောအယ်ဒီတာများမှ barnstars ပေးချင်ဘဲသူတို့စမ်းသပ်ချက်အဝီကီပီးဒီးယားအသိုင်းအဝိုင်းနှောင့်အယှက်မှမလိုချင်ခဲ့ဘူး (Restivo and Rijt 2012; Restivo and Rijt 2014) ။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ၏စမ်းသပ်မှုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ဒါကြောင့်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစမ်းသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအခြို့အတူတူပင်တည်းခိုခဲ့ကြပြီးအချို့ပြောင်းလဲပြီကြောင်းပြသထားတယ်။ အထူးသဖြင့်, လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏အခြေခံယုတ္တိဗေဒအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြောင်းလဲပြီ။ Next ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာဒီပြောင်းလဲမှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအခွင့်အလမ်းများခွဲထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ငါသုတေသီများအတိတ်၌ပြုကြပြီစမ်းသပ်ချက်များမျိုးယခုပွုနိုငျကွောငျးစမ်းသပ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။